एक पिताले आफ्नी छोरीलाई दिएको यस्तो सन्देश, जुन पढ्दा संसार रोयो ! एकपटक हे-र्नुहोला – Jagaran Nepal
एक पिताले आफ्नी छोरीलाई दिएको यस्तो सन्देश, जुन पढ्दा संसार रोयो ! एकपटक हे-र्नुहोला
बुवाले छोरीलाई उसको आइफोन उपहार दिनुभयो ।भोलीपल्ट छोरीलाई सोध्नुभयो, प्यारी छोरी ! आइफोन पाएपछि तिमीले सबैभन्दा पहिला के गर्यौ ? छोरीः बाबा मैले स्क्रेच गार्ड र कभरको अर्डर दिए, बाबाः तिमीलाई यस्तो गर्न कसैले बाध्य गर्यो कि आफैं गरेको ? छोरीः होइन,कसैले पनि गरेन, बाबाः आइफोन निर्माता कम्पनीको बेईज्जती गरेको जस्तो लाग्दैन तिमीलाई ? छोरीः लाग्दैन,बल्कि निर्माता स्वयंले नै कभर र स्क्रेच गार्ड लगाउने सल्लाह दिएको थियो, बाबाः त्यसो भए त आइफोन नै देख्नमा खराब देखिन्छ होला, त्यसै कारण तिमीले कभर मगाएको होला है ?
बाबाः त्यसो भए कभर लगाउँदा त्यसको सुन्दरतामा कमी आयो होला ? छोरीः आएन हजुर, यसको विपरीत कभर लगाउँदा आइफोन अझै धेरै सुन्दर देखिन्छ, अब पिताले छोरीलाई स्नेह (प्रेम) ले हेर्दै यस्तो भन्नुभयो,छोरी, आइफोन भन्दापनि ज्यादा महंगो र सुन्दर तिम्रो शरीर हो र यो घरको र हाम्रो ईज्जत हो । तीमीले यो शरीरको अंगहरुलाई कपड़ाले कवर गर्दा शरीरको सुन्दरता धेरै बढ्छ । छोरीसँग बाबाको यो कुराको कुनै जवाफ थिएन, थियो त केवल आँखामा आंशु देखिएको थियो ।
यो कुरा हामीले कसैंको सम्मानमा ठेस पुगोस भनेर होईन बल्की जनचेतना फैलियोस भन्ने ध्यएका साथा राखेका हौं । राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ । तस्विर सान्केतिक ।